कसले खोज्ने चौधरीको एक खर्बको स्रोत ? – Butwal Sandesh
काठमाडौं कोरोना म,हामारीबारे अर्ति, उपदेश दिँदै हिँडेका डलर अर्बपतिले प्रधानमन्त्री कोभिड कोषमा भने हालसम्म एक कौडी पनि योगदान गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार आरोपमा केही महिनाअघि प*क्राउ परेका साउदी राजकुमार अल वलिद् बिन तलालले आफ्ना केही व्यवसाय र कारोबारको कोरोना सं*क्रमणकै बीचमा नेपाली डलर अर्बपति तथा सांसद विनोद चौधरीसँग हिसाब मिलान गरेका छन् ।
यस्तो म*हामारीको समयमा पनि चौधरीले केन्याका महँगा होटल किन किनेका होलान् ? समाचारअनुसार– ‘केन्या सरकारले कोरोना महामारीबाट पर्यटन र होटल क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि दुई अर्ब केन्याली शिलिङ्गको राहत प्याकेजको घोषणा गरिदियो । उता राजकुमार पनि अप्ठेरोमा परेकाले होटल सस्तोमा बेच्न तयार भए । कोभिड महा,मारीको नाममा होटलका अधिकांश कर्मचारी हटाइएको,सस्तोमा पाइएको र सरकारी राहत राम्रै भएकाले हालको अवस्थालाई उनले सुनौलो अवसर ठानेका हुन् ।’